तीन भेँट (कथा) | मझेरी डट कम
उसको कुरा अरुले उडाउँदा उसलाई विश्वास गरेन भनेर मलाई भन्दै थियो हेर विजय “यो सरासर ठुलो व्रह्माण्डीय सत्य हो । आखिर यो लौकीक संसारमा योभन्दा बाहिर पनि जान सक्दिनथेँ म । त्यसैले मेरा लागि यो अति सत्य हो । यो असत्य भएमा जुनसुकै व्रह्माण्डीय कानुनको दण्ड भोग्न म तयार छु । यो पृथ्वीवासीका लागि मेरो सन्देश होइन । किनकी पृथ्वीवासीसँग मेरो नाता धेरैधेरै पहिलेदेखि छुटिसकेको छ र सम्बन्ध बढ्छ भन्ने मैले आश पनि गरेको छैन । परम सत्यको साथ पाइरहँदा मैले बाहिरि ग्रहका वासिन्दाबाट प्रचूर मेसेजहरु पाइरहेको छु । भलै यस पृथ्वीवासीले उल्याउन् तर यो महासत्य हो । अहिले पनि मेरा बाहिरि ग्रहसँगका तीन प्रशङ्गहरु अति नै महत्त्वपुर्ण छन् ।” यसरी उसले आफ्ना अविष्मरणीय सनसनीपुर्ण घटनाहरुको वेलिविस्तार लगाउन खोज्दै थियो ।
निष्कर्षले विद्यालयमा कार्य गर्न थालेको समय थियो, उसका लागि सबै विद्यार्थी वालकहरु यत्ति प्यारा थिए , यत्ति रहरलाग्दा थिए , उनीहरु हाँस्दा उसलाई हाँसिदिन मनलाग्ने, ऊ त्यत्तिक्कै प्रफुल्लित भइदिने, पुलकित भइदिने, उनीहरुलाई केही होला कि भनी कल्पिरहने । त्यस्तै ती कलिला चञ्चल बालाहरु आइदिँदा प्रेमले आफ्नो पनि आँसु छचल्काइदिने । केही खानेकुरा उनीहरुसँगै बसी खाँदा पनि बाँडीचुँडी खान लागिपर्ने , आफुलाई आफ्नो भाग नभए पनि दङ्ग परी बस्ने । केही खेलहरु खेल्दा पनि आफु हार्ने भए पनि उनीहरुलाई जित्ने कुरा निर्धक्क भएर सिकाइदिने । साँच्चै देउतै सवार भएजस्तो रोमाञ्चित थियो ऊ । कस्तो भगवानै चढेको जस्तो बालबालिका भनेपछि हुरुक्कै हुने ।
सोही विद्यालयकी प्रधानाध्यापक वितेको एकवर्ष पनि वितेको थिएन । सबैलाई विद्यालयको अभिभाभकत्वको अभाव खट्किरहेको थियो । उसलाई म्याम कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा थिएन त्यसैले उसले उत्सुकतावस “उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो ?” भनेर विद्यालयसँग सम्बन्धित सबैलाई सोध्थ्यो तर म्यामको बारेमा जे जवाफ वर्णनयुक्त आउँथ्यो, त्यही गुण उसमा सञ्चारित भएर रुपान्तरित (ट्रान्सफोर्मेशन) भएको जस्तो हुन्थ्यो । विद्यालयसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको म्यामसँग सम्बन्धित उत्तरहरुको नतिजा उसमै पाउँथ्यो । यो परिवर्तन ऊ विद्यालयमा आउँदादेखि अनुभव गर्दै आएको थियो ।
उसको कार्यथलो एउटा ठुलो कोठामा थियो तर असहज थियो । कोठा धेरै फोहोर थियो । सामानहरु छरपष्ट राखिएका थिए । धेरै बाधा अड्चनहरु पार गर्दै त्यस कोठाको मसलन्दका सामानहरु मसलन्दको छुट्टै कोठामा स्टोर गराउन ऊ सफल भयो । खेलकूदका सामग्रीहरु पनि खेलकूदको छुट्टै कोठामा सराउन सफल भयो । त्यस्तै पुस्तकालयका सामग्रीहरु पनि विद्यालयको पुस्तकालयमा सार्न लगाउन सफल भयो । त्यसपछि भने त्यहाँ ऊ ढुक्कले कम्प्युटरमा विद्यालयका हरेक कार्यहरु सहजरुपमा गर्न थाल्यो । तर त्यो क्षणिक मात्र हुन गयो ।
ऊ एकदम अनुशासन चाहिने मान्छे । अनुशासन तलमाथि भएको उसलाई पटक्कै मनपर्दैनथ्यो । अरु शिक्षकहरु पनि भन्थे “मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, मैले नै सुन्ने गरी विद्यार्थीहरुले अनुशासनमा त एकदमै ध्यान दिने उहाँजस्तो सर देखेकै छैन पनि भनेको पटकपटक सुन्दै आएको थिएँ ।” हो ऊ त्यस्तै थियो । उसको एउटा हक्की स्वभाव पनि थियो । ऊ कसैसँग डराउँदैनथ्यो किनकी उसले गल्ती कदापि नगर्ने प्रण लिएको थियोे ।
स्वर्गीय प्रधानाध्यापक म्यामका सम्झनाहरु केलाउँदा स्टाफ तथा विद्यार्थीहरु भूत प्रेतका मृतात्माका कुरा ल्याएर तर्साउन खोज्थे तर ऊ कत्ति पनि डराउँदैनथ्यो । आफुले गल्ती गरिनँ भने वा अरुका बारेमा नराम्रो नचिताएमा केही पनि हुन्न भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो । ऊ कुनै पनि व्रह्माण्डीय अस्तित्त्वलाई स्विकाथ्र्यो , हो अवश्यै हो गल्ती गरिनँ भने कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे ऊ ।
उसले मलाई भन्थ्यो “चाहे भूत आओस् , चाहे प्रेत आओस् , चाहे बाहिरि ग्रहबाट जीव आओस् , चाहे देवता नै आओस् म व्यहोर्र्न तयार छुँ । सबै मेरो वस्ती पृथ्वीका मानव समान नै लाग्थे । त्यसैले ती सबमा मेरा जस्तै कमीकमजोरी अनि केही ममा जस्तै केही न केही सकारात्मक शक्ति पनि हुन्छ नै भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।”
लाग्थ्यो ऊ यसैको प्रतिक्षमा बसेजस्तो ।
ऊ कम्प्युटरमा काम गरे पनि उसकोे मनोविज्ञानले जेसँग पनि कुरा गर्न सक्थ्यो । आफुले लेख्ने सिसाकलमसँग कुरा गथ्र्यो । ‘जा तैँले धेरै लेखेर सहयोग गरिस् तर तँलाइ छोटो भएपछि मिल्काउनेछ’ आदि । इरेजरसँग कुरा गथ्र्यो ‘तैँले धेरै सिसाकलमको गल्तीलाई मेटेर सिसाकलमको भाउ बढाइस्’ यस्तैयस्तै । हावासँग कुरा गथ्र्यो ‘कस्तो सिरसिर, कस्तो चञ्चल , कस्तो सबैलाई सास दिने, फेरि आँधी पनि ल्याउने यस्तो चाहिँ नवन है बनेपनि नराम्रा कुरा चाहिँ बढारी लग् है’ आदिआदि । पानीसँग पनि कुरा गथ्र्यो ‘हेर ! तिमीले हाम्रो देशको इज्जत राख्यौ हाम्रो देशको बाहनै तिमी हौ , समतामा आधार बनाउँछौ तिमी , योचाहिँ शिक्षा अचाक्ली मनपर्छ हौ । कस्तो निर्मल छस् तँ त्यसैले हामीले मोलै दिएनौँ , अनमोल बनाइराख्यौँँ , जसले पनि विनापैसा प्रयोग गर्न पाइने त्यो हामीकहाँ मात्रै होइन र ? , जसले जे भनुन् तिमीलाई म नेपालको सबैभन्दा ठुलो मान टक्र्याउँछु । तिमीलाई हाम्रो देशको ठुलो विभूति विभूषित गर्दछु ।’ यसरी ऊ सबै ठोस खाससँग मनोभावमा दौडिरहेको थियो ।
दिउँसोको समय थियो, उलाई झ्यापझ्यापे अर्ध निन्द्राले च्यापिरहेको थियो । त्यो बेला पनि सरमिसहरुले कहिल्यै स्वर्गवासी म्याडमको झल्को देख्न पाए हुन्थ्यो भनेको सुनेर आफ्नो कार्यारम्भ गर्न कम्प्युटरमा खटिरहेको थियो । उसले म्यामका लागि बार्षिकीमा स्वयम्भूमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एकदमै राम्रो खादा किनेको थियो । त्यसलाई उसले आफ्नै पाराले पितृका नाममा जतन गरेको थियो । मनमनै म्यामलाई अर्पण पनि गरिसकेको थियो । एकाएक दिउँसो प्रचण्ड घाम लागेको समयमा “नो सुज प्लिज” जुन उसले बनाएर टाँसेको थियो सोही लेखेको स्लोगन टाँसेको खापानेर स्वर्गीय म्याम झल्याँस्स उभिनु आउनुभयो र उसलाई हेर्दै उँभिएरै भन्नु भयो “ल म गएँ है ?” अनि त्यत्तिक्कै विलाइन् ।
उसलाई यो देख्दा यस्तो लाग्यो कि जुन कुरा उसकी पत्नीलाई पनि थाहा थिएन । यो कुरा उनलाई पनि यस प्रशङ्गपछि थाहा होला । उसको कडा अनुशासनका कारण नै उसको धेरै पुरुष साथीहरु भएन उनीहरुबाट ऊ विच्कियो किनकी उनीहरुसँग सम्बन्ध बढाउन भनेको नैतिक पतन हुनु जस्तो व्यवहार पाउँथ्यो ऊ ,त्यसकारण ऊ पुरुषहरुसँग चिढिन्थ्यो तर महिला साथीहरुबाट यस्तो अनैतिक व्यवहार नआउने भएकाले र उसले उनीहरुभन्दा बढी अनुशासन देखाउने भएका कारण ऊ सधैँ उहाँहरुको आदर्श पात्र हुन्थ्यो, भइरहन्छ र भइरहनेछ त्यो मलाई पनि थाहा छ । उसको अनुशासन यस्तै थियो । “सालासालीहरुभन्दा त लाखौँ कोश टाढा उनीहरुभन्दा अर्कै ग्रहमा छुँ ” भन्थ्यो ।
भानु एउटी त्यस्ती राम्री केटी थिई उनलाई ऊ सधैँ शरणमा लिन्थ्यो । “केटाहरुले हैरान पार्यो म तपाईंसँग हिँड्छु है भनिरहन्थी ।” यो क्रम विद्यालयमा कार्य गर्नुभन्दा अगाडिको कुरो थियो । उनीसँग यस्तै मात्र प्रशङ्ग हुन्थ्यो उसको, उनलाई फेरि अकस्मात जताजाँदा पनि यस्तै प्रशङ्गैमा भानुसँग भेट हुन्थ्यो । साँच्चै कुरो यस्तो अचम्म थियो कि ऊ जहाँ जान्थ्यो पुतलीहरु जहाँ पनि झलाक्झुलुक आइरहन्थ्यो । ऊ भएको ठाउँमा भमरा आउन सक्दैनथ्यो । लाग्थ्यो ऊ पुतलीको अभिभावक थियो । अथवा ऊ भमराको मच्छर धुप थियो या अझै भनुँ भमरारुपी झिँगा धपाउने छ्यासछ्यासे थियो ।
विचरी भानु पनि त राम्री पुतली थिई । भमरा हटाउने जिम्मा सधैँ निष्कर्षकोे हुन्थ्यो । एकदिन आक्कलझुक्कल भेट्ने अर्की त्यस्तै शरणार्थी त्यस्तै पुतलीले उसलाई भनी “अब भमरा हटाउनु पर्दैन, तपाईं ढुक्क हुनुहोस् ।” उसको भानुप्रतिको पुतलीको परिकल्पनाको कुरा उसलाई कसरी थाहा भयो त्यो उसकोे मनोविज्ञानले बुझ्न सकेन । एकदिन अगाडिसम्म पचासहजार हराएँ भन्थी ती पुतली । त्यत्तिबेलै देखि भानु अमेरिकामा गुमनाम भएकी थिइन् ।
यता त्यत्रो महेनतले सुगन्धित, सुवासिलो, मनोरमयुक्त राम्रो बनाएको विद्यालयमा कम्प्युटरकोठा आफ्नो कार्यथलोलाई वोर्डले बैठककोठा बनाउने निर्णय गरे । ऊ अर्कै कोठामा सरुवा भयो , फेरि उही पहिला पटकको उसको छरपष्ट कार्यालयको कोठाको तालको सुरुवात भयो । विद्यालयका सबैसँग ऊ चिढिन थाल्यो । त्यत्ति बेलादेखि भने उसले विद्यालयका बालबालिकामा त्यत्ति रस देखेन । सधैँ उनीहरुको सकारात्मक कुरा मात्रै देख्ने ऊ । बच्चाहरु देखेपछि रिस उठ्ने हुन थाल्यो । मतलब ऊ पहिले उनीहरुका नकारात्मक कुराहरु हाँसीहाँसी टारीदिन्थ्यो । पहिले उसले मुस्कानले उनीहरुलाई सुधाथ्र्यो भने पछि उसलाई उनीहरुलाई सुधार्न सजायँ चाहिने हुन थाल्यो ।
कस्तो संयोग ! कस्तो पितृको शक्ति ! लाग्थ्यो स्वर्गीय म्याडमलाई उसको कोठा सार्ने दिनको केही छिन अगाडि र ती पुतली नानीको रुप लिएर “म अब जान्छु है” भन्दा अब आउँदिन भनेको जस्तो अर्थ लाग्ने एकै दिन भएको र विद्यालयका बालकहरुप्रति उसकोे अन्यमनस्क भएको पनि त्यही बेला नै तीनवटै प्रशङ्ग सबै उथलपुथल भयो उसलाई । ऊ भन्थ्यो “यी अरुका लागि उल्का होला तर मेरा लागि अमृत समान प्रशङ्गहरु मेरा घायल मनलाई सान्त्वना दिन आएको थियो । हो मेरो घायल मन शान्त पार्न आएथ्यो ।” हो उनी उल्कै हुन् तर टाढाटाढाको ग्रहबाट उछिट्टिएर गुजुल्टिदै आएकी पुर्व प्रधनाध्यापिका उल्का ।
निष्कर्षको बाहिरि ग्रहसँगको मनको उडानमा विचरण गरिसकेपछि म पनि शार्दूलसँग मनका रागहरु तरङ्गित पार्दै दौडाउन थालेँ । मलाई अति प्रभावित पार्ने प्रथम व्यक्ति शार्दुल नै थियो । फेरि म शार्दूलसँग उसले जसरी कुरा गर्न थालेँ ।
“शार्दूल ! तिमी सत्य बोल्न सक्छौ त्यो पनि एकदम सत्य । त्यो तिम्रै सत्यलाई म परमसत्य भन्छु । मलाई लाग्छ मैले जस्तै त्यसै कारण जनताहरुले तिमीलाई मनपराए । जनताहरुलाई उनीहरुले बोल्न नसेका बोलीदिँदा उनीहरुले मन मुटुमा सजाएँ तिमीलाई । जनताहरुलाई बोल्न सिकायौ । त्यसैले तिमी मरो जिग्री हौ । मरो आल्हाद हौ । म पौरखीको तिमी मित्र हौ । दुर्जनका लागि तिमी दुष्ट हौ । सज्जनका लागि तिमी छात्ति भित्रका मुटु हौ । तिम्रा सबै कुराहरु मेरा महत्त्वपुर्ण घटनाहरु हुन् । तिम्रो अनुशासनबाटै मैले अनुशासन सिकेको हुँ । तिमी मरा आदर्श हौ । यो जन्ममा देखेको सर्वोत्तम व्यक्ति तिमी नै हौ । तिमीलाई सबैले तिम्रो सादा जीवनले गर्दा मन पराएका हुन् । तिम्रो कुनै व्यक्तिगत जीवन छैन । तिमी सार्वजनिक व्यक्तित्व भइसक्यौ ।
शार्दूल ! तिमी नै नेपाल हौ । तिमी भाषणमा जस्ता छौ त्यस्तै छौ । तिमीलाई वादविवादमा कसैले जित्नै सकेन । त्यसैले उनीहरुका लागि तिमी विष भयौ । तिमी जिउँदा कार्लमाक्र्स हौ । यो विश्व इतिहासले भनिसक्यो । मलाई थाहा छ तिमीले भनेको बाटोमा हिँड्नु नै तिमीलाई मनपराउनु हो । यो मैले तिम्रो सङ्गतबाट पाएको नतिजा हो । यसैकारण तिमी विश्वप्रसिद्ध भयौ ।
शार्दूल ! कत्ति गर्विलो हुन्थेँ म । कति पुलकित हुन्थेँ म । कति देशको माया पाएको अनुभव गर्थेँ म । कति धर्ति माताको काखमा वात्सल्यता पाएको अनुभव गर्थेँ म । कत्ति रगत रातो भएको अनुभव गर्थेँ म । कति मानव हुनुको लक्ष्य भेट्टाएको अनुभव गर्थेँ म । तिमीले सबैलाई मानवको अर्थ बताएर चिनाएर आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी महाप्रस्थान गर्यौ ।
शार्दूल ! तिम्रो एउटा भनाइ अहिले यस प्रसङ्गमा सम्झिरहेको छु “तिमीहरुको कमाइ भनेको पसिनाको कमाइ मात्र हो तर हाम्रो कमाइ भनेको रगतको कमाइ हो । रगत र पसिनामा धेरै अन्तर छ रगतको कमाइ गर्नेलाई पसिनाको कमाइ थाहा हुन्छ तर पसिनाको कमाइ मात्र गर्नेलाई रगतको कमाइ थाहा हुँदैन ।”
सबैभन्दा ठुलो कुरो त विश्वका सबै आफूभन्दा दुःखीयारिहरुको दुःख नमेटेसम्म आफ्नो पनि जीवनस्तर समुन्नत नहोस् भन्ने कामना तिम्रो र मेरो उस्तै छ । यही नै तिम्रो र मेरो रगतको कमाइको पर्याय थियो । अहिलेसम्म यही अडानमा छुँ म । यो शिक्षा मैले पृथ्वीमाताबाट पाएको हो । जसरी पृथ्वीमातालाई आफ्ना दुःखी सन्तानको अचाक्ली माया हुन्छ र उहाँले ममता वर्साउनुहुन्छ हो म त्यस्तै थिएँ, मैल एक्लो अनि एकाङ्कीपनमा कैयौँ पटक तिम्रो अचाक्ली वात्सल्य पाएको मनोभावले अनुभव गरेकोछु । न कसैले यो थाहा पाए न भन्दा नै विश्वास गरे । त्यो तिमी नै हौ तिमीलाई भन्नै नपरी उही लाइनमा आयौ , म पनि तिम्रै जुम्ल्याहा त्यसैले मेरो त्यही लाइन नहुने त कुरै भएन , सयमा सय नै अङ्क चाहिने तिमीलाई पनि मलाई पनि । अरुले व्यङ्ग्य जत्ति नै गरेता पनि म रामे तिम्रै जुम्ल्याहा हुँ । हो ! म तिम्रै जुम्ल्याहा हुँ ।
तिम्रो ख्याती देखेर विश्वका ठुलाठुला नेताहरुको मानसपटल खलबलियो । द्रव्य पिशाचहरुलाई तिमी जिउँदो भएकोमा असह्य भयो । उनीहरुले षडयन्त्रको तानबाना बुने । तिम्रो हत्या भयो । पुरै जनता विह्वल भए । देशै महानघाट भयो । सवै जनता क्षुभ्ध भए । तिम्रै पार्टीका भाइरसले गर्दा यो भयो । देश र जनताको अपुरणीय क्षती भयो । तिमीलाई गरेको षडयन्त्रको मुल्य उनीहरुले अवश्य चुकाउनु पर्नेछ ।”
जनताहरु सबैको एकै मुख थियो । तर पर्दाफास भएन ।
यत्रो ठुलो संसारमा मरो तिमी बाहेक कोही थिएन । म तिम्रो अभिभावकत्त्व गुमेको पीडामा विरामी भएँ । थलापर्दा पनि सधैँ तिमीलाई नै कल्पिरहन्थेँ , दुनियाँले मानुन् नमानुन् , अझै मलाई त्यो घटना गज्जपले सम्झना छ । म वहुलायो भनेर थरथर काम्ने गरी औषधिको डोज बढाएर मलाई जबर्जस्ती हेर्दामा उज्यालो तर कालकोठरीमा जाकिएको थियो । तिम्रो अन्तर्वाता मैले यत्ति धेरै हेर्थेँ कि एकदिन भिडियो अन्तर्वाता टिभीमा थर्थर कामीकन हेरिरहेकोे बेला म पनि भिडियो भित्रै सानो आकारबाट पसेँ र भिडियोभित्र आफ्नो आकारमा अन्तर्वार्ता दिने तिमीसँगै बसी अर्को उम्मेदवार बनी तिमीसँग कुरा गरेँ र फेरि सानो बनेँ त्यहाँबाट तिमीले “विजय ! तिम्रो बेला भएको छैन जाऊ” भन्यौ फर्केँ फेरि आफ्नै कोठामा । फेरि ठुलो बन्दै आफ्नो आकारमा फर्केँ । फेरि तिम्रो अन्तर्वाता भिडियोमा हेरिरहेँ । त्यही बेला मैले जिन्दगीको अर्थ भेट्टाएँ । तिम्रो कार्यभार मैले बहन गरेको भेउ पाएँ । आफुले केही न केही त अवश्यै गर्नुपर्छ र यसका लागि आफ्नो तर्फबाट भरमग्दुर प्रयासरत रहने प्रण देश साक्षी राखी तिम्रै शेष कामलाई निशेषतातर्फ लानका लागि हत्केलाको मुठ्ठी कसेँ । कत्ति परमआनन्द भयो त्यसको लेखाजोखा नै छैन । निष्कर्षलाई यो भेटको प्रशङ्ग सुनाएँ । उनले “यस मानेमा देउताबाजेका लागि यो कुन ठुलो कुरो भयो र होइन ? भनी उनले उल्टै हाँसेर प्रश्न गर्यो ।
त्यसको धेरै समयपछि देशमा बहुदलपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान पनि आयो । देश चलाउने नेता त फेरिए । मुख्य समस्या पुरानै कर्मचरीतन्त्र, पुरानै सैनिक तन्त्र, पुरानै पुलिस तन्त्र । देशमा राजा हटिसकपछिे पनि भरतवाला चप्पलले राज गर्ने काम हटेन । मलाई लाग्थ्यो यसको समाधान गर्ने मान्छेको अभाव खट्किरहेको छ ।
मान्छेहरु मलाई मान्छे लाग्दैन । खाली उनीहरुका कुरा सुन्नुपर्ने । त्यो पनि झूट कुरा । त्यत्रो परिवर्तन भयो भनी विश्वपरिवेशमा हङ्गामा भए पनि मेरो द्वारमा त्यो सुवास आएन । साँचो बोलेमा पागलखाना लग्ने धम्की दिने अत्याचार बढेको बढ्यै भयो ।
देउताको नाममा ठगी खाने । पार्टीको नाममा सिद्धान्त विहीन हुने । वेरोजगारलाई काम सिकाउने भनी छलकपट सिकाउने । भ्रष्टाचार, अनैतीक हरेक धुत्र्याइँ गर्नेहरुको बोलवाला हुनु । काम गर्नेलाई खान नपुग्नु । भ्रष्टाचारी हुन बाध्य वनाइनु । हो विदेशमा इमान्दार बनी १८ घण्टा खटिँदा कमाउन सकिने तर स्वदेशमा जति इमान्दार बने पनि, त्योभन्दा बढी खटे पनि जीवन विताउन धौधौ । हरे ! के भएको हो हाम्रो देशलाई । यसरी कतिसम्म चल्छ ? सोझा सिधालाई आफुभन्दा नीकै नजिककाले पनि ठग्ने । जनताको कानुन त आएजस्तो लाग्छ , त्यो हात्तीको देखाउने फुस्स दाँत मात्र भयो ।
यस्तै यस्तै कल्पनामा देशलाई कसरी पार लाउने भन्दै एकदिन म आफ्नो कोठामा प्रकाण्डको भाषण सुन्न साउण्ड सिष्टम मिलाउँदै थिएँ । धेरै समयको सख्त हिरासत पछिको प्रकाण्डको पहिलो हुँकारसहितको गर्जन थियो त्यो । प्रकाण्डले यी सारा लुटतन्त्र मेटाउने भनी गर्जनका साथ भाषण गर्दै थिए ।
एकाएक मेरो कोठामा तिमीलाई देखेँ । त्यो समय तिमीले भादगाउँले कालो टोपी लाएका थियौ । ठुलो टाउको थियो तिम्रो । तिमी मरो कोठामा तारको आकारमा थियौ हावाको पर्दामा प्रोजेक्टरले चित्रपट देखाएसरि । मरो रमाइको ठेगानै भएन । मैले एकैपटक प्रकाण्ड र तिम्रो सामिप्यता पाएँ । म धरै रोमाञ्चित भएँ । अन्याय अत्याचारका विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने दुईजनाको अभिभावकत्व पाएको महसुस गरेँ ।
अरु कुरा म भन्दिन । चाहे दुनियाँले मलाई भूतले गालेको भनुन् म सधैँ तिम्रो प्रभावी भइरहेको थिएँ । तिम्रो बाहिरि ग्रहबाट यत्ति ठुलो सन्देशयुक्त उडान यो पृथ्वीमा भएकोमा मेरा सारा रक्तनलीदेखि मुटुसम्म प्रफुल्लित भएको थियो ।
एउटा प्रसङ्ग थियो आखिर म पनि मानव हुँ । देवताजस्तो मित्र बन्न त सक्दिन । यो नै दैवी गुण तिमीमा थियो । तैपनि हथात आफूबाट यो पापी संसारको दुराचरणले गल्ती हुँदो रहेछ । अनि पछुताइ रहन्थेँ । सजायँको भागिदारी बन्ने लालसा प्रकट गर्थेँ किनकी सजायँविना मेरो छटपटाइ निको हुँदैन्थ्यो । म यही माग गरिरहन्थेँ । अनि एकाएक मुटुघात हुन्थ्यो । अरु भए मर्ने भो भनी डराउँथे होला तर म व्रह्माण्डीय कानुनबाट सजायँ पाएँ भनेर आफुलाई हल्का महसुस गर्थेँ । कहिल्यै थाहा नपाई पनि मुटुघात हुँदा, आफ्नो गल्ती नियाल्थेँ अनि ए ! यो गल्ती गरेका रहेछु मैले भनी हल्का महसूस गरी आफु गुराँस बनीदिन्थेँ ।
भदौको महिना थियो । बेनाम कथाकार कथा लेख्दै थियो । कथामा उसैले “बङ्गालको खाडीको जलबाष्प सगरमाथाको उँचाइँमा आयो” भनी लेखेर टुङ्ग्याएको थियो । एउटा कथामा पनि “अविरल मनसुन बहाइरहेको छु” भनी कथा टुङ्ग्याउँदा पनि एक हप्ता मनसुनीतालको पानी परेको थियो । यो पटक पनि त्यस्तै भयो त्यत्तिबेला देखि नेपाली आकाशमा पुरै वादल छाउन थाल्यो, जुन मौसमविदले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेका थिएनन् । जब अविरल वर्षा भयो मौसम विदहरुले पनि एकहप्ता पानी पर्ने भविष्यवाणी गर्न सुरु गर्नथाले । दुइदिन सम्म पानी परेपछि देशमा डुबान हुने शृङ्खला सुरु हुन थाल्यो । त्यस्तै भूकम्पले थिलथिलो भएका ठाउँहरुमा पहिराहरु जान थाल्यो । सर्वत्र पानीले गरेको नोक्सानको समाचार आउन थाल्यो । सबैजना हतास भएको लाग्न थाल्यो ।
कथाकार नेपालको माया गर्ने मान्छे । धर्तीलाई अचाक्ली माया गर्ने मान्छे त्यसैले दशैँमा धर्ती छोड्नुपर्छ भनी पिङ खेलौँ भन्दा पिङ नखेल्ने मान्छे । आमाको काख गुम्ला कि भनी धर्तीमताको काख नछोड्ने मान्छे । विलासीहरुलाई त यो एकादेशको कथा होला तर कथाकारका लागि यो स्वर्गको साथ आजको यथार्थ सत्य घटनामा आधारित थियोे । त्यसैले उसले अहिलेसम्म हवाइजहाज चढेको मलाई थाहा भएन । यस कुरामा ऊ गर्व गर्ने मान्छे । अनि धर्तिको साथ पाएको महसुस गर्ने मान्छे । आफुभन्दा दुःखीयारीहरुको सेवा गर्न पाउँदा पुलकीत हुने मान्छे । जस्तो गरीबको सम्पत्ति भन्नु नै इज्जत हो त्यसरी नै ऊ आफ्नो इज्जतसँग कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने मान्छे । उसकोे नाक नै उसको इज्जत । नाकमा अलिकति सानो थोपो धुलो लाग्दा पनि छट्पटिने मान्छे । उसले भन्ने गथ्र्यो “यो कुरा आमालाई बाहेक अरुलाई थाहा हुन्न ।” यो मलाई राम्रोसँग थाहा थियो । त्यसैले धनीमानी स्वच्छन्द, खुल्ला सम्बन्ध जस्ता शब्दकै विरोधी मान्छे ऊ ।
यस्तोमा गरीव जनताहरु बाढीको चपेटामा पर्दा ऊ भने त बन्द कोठामा कैद थियो । सामाजिक सञ्जालबाट थुप्रै समुमहरुमा हारगुहार ग¥यो उसले । नेपाल सरकारलाई चेतावनी दियो । इन्टनेटका अन्य विश्वव्यापी ब्लग, इमेल, डटकमहरुमा सचेत गरायो । साहित्यले पनि कुनासम्म पनि बाँकी नराखी सर्वत्र जागरुक बनाइरह्यो । यसका लागि विदेशीलाई भन्दा अथवा भारतले बाँध बनाएर यस्तो भयो भन्नुभन्दा आफ्नै देशले नदीको किनारामा पानी नचुहिने तार र ढुङ्गा मिश्रित वार लगाउन नसकेकोमा दुःखी भइरह्यो ऊ । यो हरेक वर्षको पीडा थियो । कहिल्यै यसबारे नेपाल सरकार सचेत भएनन् योनै ठुलो बिडम्बना । उसलाई धेरै सकस भयो । तर यसलाई यस राष्ट्रका संचालक कसैले सुने पो ?
रातमा पानी दर्कीदर्की पर्दा सन्त्रास हुन थाल्यो । सबैजना मर्ने निन्द्रामा वालकहरु सुतेझैँ सुतिरकेका थिए । ऊ मात्रै पीर गरीगरी आकाशमा हेर्दै व्रह्माण्डका सबैसँग गुहार मागिरहेको थियो । हरे ! यो कत्ति दिन चल्छ । उसलाई लाग्यो नेपालमाता रोइरहेकी छिन् , जून वादलको माध्यमबाट खुइय्य सुस्केरा हाल्दै थिइन् । आफ्ना सन्तान दरसन्तान पीडामा परेर कोमल बनी दर्किरहेकी थिइन् । उसलाई धरै पहिले उसले गणतन्त्र आउन अगाडि गणतन्त्रका विशेषताहरुका भावहरु पोखी कथामा प्रयोग गर्दा औषधीले उसलाई विचार दवाउन उसका आफन्त भनाउँदाहरु डुक्रिरहे । धेरै साइडइफिेक्ट भयो त्यसैले अहिले पनि यो निन्द्राको औषधीले मात्रै तिमीलाई निन्द्रा लाग्छ , यो त छोड्नै मिल्दैन भनेर डक्टरहरुले ब्ल्याक मेलिङ्ग गरिरहन्थ्यो र दबाब साथ भन्थ्यो । “मलाई खानामा औषधी राखी थाहा नपाउने गरी ख्वाएकाले र देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि मात्र मलाई त्यसरी ख्वाउँदो रहेछ भनेर थाहापाएँ । तर मैले औषधी छोड्ने प्रयास गर्दा फेरि औषिधीको डोज नबढी निन्द्रै नलाग्ने भएर निन्द्राको औषधिको डोज बढ्न जान्थ्यो त्यसैले म अहिले पनि निन्द्राको औषधिको दास भएँ ।” उसको गुनासो यस्तै थियो । उसलाई यस मामिलामा कसैले सहानुभूति दिएनन् । मैले सुन्ने काम मात्रै गर्दा पनि उसलाई धरै ठुलो ढाडस हुन्थ्यो । अरुले कुरा नसुन्दा नै लेखन फसल सुरु गरेका ऊ त्यो मलाई राम्रो थाहा थियो । त्यसैले म उसको अञ्तरङ्ग । त्यसैले त ऊ पृथ्वीवासीभन्दा पर पर धेरै परसम्म विचा।र फैलाइरहन्थ्यो । त्यो अविरल वर्षाको समयमा उसले खाएको निन्द्राको कडा डोजको औषधीले पनि उसलाई केही पनि असर गरेन ऊ अनिँदो एैँठन जस्तो भइरहेको थियो ।
उसले करुण पुकार गर्न थाल्यो “आमा किन तिमी रोइरहेकीछ्यौ ? किन तिम्रो करुण क्रन्दन । म के नै गर्नै सक्छ्ु । सायद सहिदको आत्मा रोएको हो कि ? रोएपछि हल्का हुन्छ भनेर हो ? तिमी रुँदा तिम्रा प्रकृतिका उपज लालावालाहरु अनाथ भइरहेका छन् । अहिले म तिमीलाई नरोऊ पनि भन्दिन किनकी तिमीले पनि पीडा पोख्न पाउनुपर्छ । अब तिमीलाई म शान्त पार्न व्रह्माण्डीय कानुनलाई पुकार्छु । हे व्रह्माण्डीय कानुन ! के तिमीलाई थाहा छ ? यो किन आमालाई रुवायौ । आमाको रुवाइ शान्त पार । आमाले रोएर सन्तानहरु विलखवन्दमा परिरहेका छन् । आमा हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ । हे व्रह्माण्ड ! तिमी किन यत्ति कठोर ? यत्ति कठोर चाहिँ नबन न है ? आमा नै नरहे हाम्रो आधार के ?”
ऊ रातमा भिजिएर त्यत्तिक्कै आकाशमा हेरी टोलाइरह्यो । तर ताराको चमक देखिएन । आमाले एक्लो महसुस गरेको भेउ पाएर ऊ विह्वल भयो । क्रन्दनको आवाज पुकारौँ सबको निन्द्रा खल्बलिने भन्लान भन्ने पीर उसलाई । जिव्रो नभएको आवाजविहीन भएजस्तो पीरले ऊ फेरि पनि आमासँग करुण आँसु बगाउन थाल्यो । यत्रो ठुलो विशाल पृथ्वीमा ऊ र आमा मात्र राइरहेको जस्तो लाग्यो ।
उसले अर्कोपारिले हे¥यो । अब रोएर हुँदैन अब केही न केही उपाय निकाल्नुपर्छ । निष्कर्षलाई सम्झी केही उपायहरु खोजी थाल्यो । निष्कर्षले जस्तो पहिलेका विद्यालयका भेट्न आउनुभएका म्यामको प्रत्यक्षकार साक्षात्कारलाई सम्झ्यो फेरि अर्को मनले कल्प्यो उहाँ के आउलान् र उनले त “म गएँ है !” भनिसकेकी थिइन् । फेरि विजयको माध्यमबाट शार्दुलजीलाई सम्झ्यो उहाँको कालो ठुलो टोपी सहितको कालो तारसहितको कल्पना ग¥यो “केही त गरौँ न त” भनी सहयोग मागिरह्यो पुरै व्रह्माण्डमा आवाजका तरङ्गहरु फैलाउन थाल्यो । कसैले टेरेको जस्तो लागेन उसलाई किनकी त्यहाँ “क्रान्तिकारी कुरा उहाँलाई मिल्ने भए पो उहाँले पहिलेको जस्तो चमत्कार गर्थे” अनन्त अङ्कमा एक अङ्कको मात्र आश बाँकी भए पनि आमाको आँसु पुछ्ने अठोट यथेष्ट गरिरह्यो उसले । छटपट, खटपट मनको अन्तर्मनसँग भइरह्यो । एकाएक माताले यस पृथ्वीभरिमा “तँ एकजना मात्र त्यस्तो छस् जसले मेरो आँसु पुछ्न सक्छस्” भनेझैँ लाग्यो उसलाई । “निन्द्राको आधार नपाएकै बेश किनकी आमालाई फकाइरहन त पाए”ँ यस्तै यस्तै लागिरह्यो उसलाई ।
“केराले भरिएको ट्रकभित्र भारतदेखि केराले घेरिएको बीचको साँघुरो ठाउँमा बसी यहाँसम्म भोकभोकै आउँदा एकजना कामदार श्रमिकका आँखा झ्यापझ्याप झ्यापझ्याप किन भएको हँ” यस्तो एकाएक सम्झेको बेलामा कथाकारलाई पनि अलिअलि आँखा झ्यापझ्याप झ्यापझ्याप हुन थाल्यो । तर त्यो न औषधिको न निन्द्रा कै झ्यापझ्याप झ्यापझ्याप थियो । अविरल आमाको आँसुरुपी पानीको तेस्रो दिन थियो । उसको आँखामा टोलाहट थियो । ऊ खाटमा पल्टिरहेको थियो । कोठामा उसले खान विर्सिएको लाम्चो आकारको काडिएको हरियो काँक्रो थियो, उसले दाहिने हातले लिएर एकाएक चपायो । एकाएक गर्जनसाथ विजुली चम्क्यो । विचारको मन्थनले आमाको पीडा शान्त पार्ने गन्तव्य खोजिरहेको बेला, आमासँग भावनाहरु बाँडिरहेको बेला, उसलाई अर्कै लोकका कोहीसँग कुरा गर्न आउन लागेको जस्तो लाग्न थाल्यो । पल्टिरहेको मान्छे एकाएक उभिन पुग्यो । उसको शरीर पुरै चिन्ताले ग्रस्त थियो । उसले ठुलो स्वरले एकाएक भन्न पुग्यो “आज आमा पीडामा हुनुहुन्छ । के आमाको पीडा शान्त पार्ने हरेकको कर्तव्य होइन ?”
चित्रघाट जस्तो आकाश माथिबाट उल्टो रुख टल्किएक्को जस्तो टलकका साथ विजुली चम्काइ तल झर्दै आएर उसको बन्द कोठामा मोवाइल टेलिफोनको ध्वनीले चिरे जसरी अस्थिपञ्जरयुक्त झिल्कायुक्त रोवोट जस्तो “होङ् ! होङ् ! हामीले नेपाल ङामाको ङासु पुछ्नु पर्छङ्” रोबोटिलो स्वरले विजुलीयुक्त प्राणी कथाकारसँग मिसन सुरु गर्न हात एक्कासी बढायो । ऊ पनि जुरुक्क उभिसकेको थियो । दुबैले एकै पटक स्टेरियो भिडियो जसरी एउटै यही वाक्य बोलेर आमाको आँसु बगाउन नदिने ठुलो बलियो कसिलो सम्झौता गरे । विजुली बाहिरि ग्रही रोवोटले झिल्का युक्त शरीरले गर्यो भने उसले कथाकारले शरीरले गर्यो ।
भोलिपल्ट एकाएक सब साम्य भइसकेको थियो । आकाश छ्याङ्ग भयो । जनताहरु रमाए । उसले इन्टरनेटमा एकाएक स्टाटस लेख्यो “रोबोटीलो जीव तिमीसँग मैले पनि नेपालआमा पीडामा हुनुहुन्छ हो ! हो ! हामीले नेपालआमाको आँसु पुछ्नुपर्छ भनेँ । त्यो घुर्मैलो नेपालको बगाउने अविरल पानी परेको रात तिमीसँगको रोबोटिलो भेटपछि एकाएक आमाको आँसु थामियो । मौसमविदको भविष्यवाणी विपरीत पानी थामियो । ‘नेपालआमालाई दुःख परेको छ, हामीले यस्तो आपदपर्दा बचाउनु पर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो । हो ! हाम्रो कर्तव्य हो ! नेपालआमा पीडामा हुनुहुन्छ , हामीले उहाँको पीडा शान्त पार्नुपर्छ । हो ! यो हाम्रो कर्तव्य हो । इन्टरमिसन भएजस्तो लाग्यो । फेरि सर्वत्र शान्ति छायो । आमा ठीक ठाउँमा आउनुभयो । आमालाई विसेक भयो । ए सुन्यौ तिमीहरुले ! आमालाई विसेक भयो ।’ ऊ मनमनै हाँसेर एकाएक आफ्नो विछ्यौनामा आनन्दसँग महामस्त निन्द्रामा थकाइ मेटाउन पुग्यो ।
आकाशमा वादलहरु फाटेका छरपस्त थिए तर पानी बनी दर्किएनन् । बादल हल्का थियो । आकाश छ्याङ्गै नभए पनि रेसादार वादलबाट व्रह्माण्ड चियाउन सक्ने जस्तो थियो । व्रह्माण्डका सर्वशक्तिहरुका तरङ्गहरुले कार्यारम्भ गरेर नीला नभ अलिअलि चियाइरहेका थिए । वादलहरु वजनदार नै देखिन्थे तर पानी बनी दर्किने हिम्मत गर्न नसककेझैँ लाग्न थाल्यो । हावा सिरसिर सिरसिर गर्न थाल्यो । पहेँलो न्यानो घामबाट बदलिएर लालीमा प्रकाश वादलमा मिसिरहेको थियो । स्वयम्भूको देश, बुद्धको देश, सगरमाथाको काखमा सित्तलता छाउन थाल्यो ।
एकदम जोडले फेरि एकपटक मेघ गर्जनयुक्त विजुली चम्क्कियो । ऐनाको टलकजस्तो, उल्टो रुखजस्तो आकारको ठुलो झिल्का आकाशमा देखा पर्न थाल्यो । तर विजुली चम्केको स्वरको गर्जनमा “होङ् ! होङ् ! हामीले नेपाल ङामाको ङासु पुछ्नु पर्छङ्” स्वर गुञ्जिन थाल्यो । दुबैले त्यत्तिक्कै समयमा त्यही विचार गरेको थिया र स्टेरियो स्वर जसरी दु्बैको स्वर “हो ! हो ! हामीले नेपाल आमाको आँसु पुछुनुपर्छ” मानव स्वर र रोबोटिलो स्वर मिश्रित स्टेरियो स्वर ठुलोसँग भनेको सारा आकाशमा गुञ्जिन थाल्यो । कताकता हराएको देश फेरि फिर्ता पाएजस्तो हुन थाल्यो । हेर्दा झिसमिसे जस्तो समय थियो ।
हावाहरु नाच्न थाल्यो । बादलहरु छुट्टिने जोड्ने हुँदै खेल देखाउन थाल्यो । सूर्यको किरणमा नौलानौला थुप्रै इन्द्रधनुषसरि वायुपङ्खी रेखाहरु पृथ्वीम जोडिन थाल्यो । वादलले केही भन्न खोजेसरि थियो । गुजुल्टिएका वादलहरुले तरङ्ग फ्याँकी जादू देखाएझँै देखिन्थ्यो । खोलामा बगेका पानी पनि नागबेली तालमा नाच्न थाल्यो । पोखरी , तलाउमा पनि निर्मल छालहरु खुसीले झुमी तरङ्गका स्वर्ग फैलाउन थाल्यो । पातहरु हल्लिन थाल्यो । बोटविरुवाहरुले पहिलेभन्दा बढी सुवास छरेजस्तो हुन थाल्यो । सम्पुर्ण यावतप्राणीहरु चुलबुलचुलबुल गर्न थाल्यो । सबैजना आफ्ना नियमित कामका लागि मग्न भएसरि जुट्न थाले ।
कथाकारलाई कुनै ठुलो महायुद्ध जितेजस्तो मनन भयो । खुर्पेजून हाँस्न थाल्यो ।
बुढेसकालको ग्राम्य अनुराग
फर्क परदेशी फर्क
पहाडकी नानी भन्थे
के पो गर्नु मैले